Hakha – Travel Chin State
ဟားခါးမြို့သည် ချင်းပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ဟားခါးမြို့သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၈၇၀ မီတာတွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အအေးဆုံးမြို့များတွင် တခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဟားခါးမြို့ကို လှပသော ရှုခင်းများ နှင့် ရှေးဟောင်း အိမ်များကို နှစ်သက်တတ်သော သူများအတွက် လူကိုယ်တိုင် သွားရောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် မဖြစ်မနေလည်ပတ်သင့်သော မြို့ဖြစ်ပါသည်။ ဟားခါးမြို့ရှိ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသော နေရာများမှာ Hakha Viewpoint (1)၊ Hakha Viewpoint (2)၊ ချင်းရိုးရာစော်ဘွားအိမ်၊ ဟားခါးနှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်း၊ ချင်းရိုးရာပြတိုက်၊ အိုင်ဒီးရက်ကန်းအိမ်၊ သီမြစ်လွင်ပြင်နှင့် ဟားခါး ဈေးတို့ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဟားခါးမြို့ကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမှ တိုက်ရိုက်ကား ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကလေးမြို့တဆင့်မှ လေကြောင်းဖြင့် လာရောက်လည်ပတ် နိုင်ပါသည်။
Na tho tha ma
[ Na thau hta ma ]
[ Mang Tha ]
Na dam ma?
[ Na dam ma ]
Na ei cang ma?
[ Na aiy cang ma ]
Mah hi zei zat?
[ mah hi zei zat ]
Zei tin kal khawh si?
[ Zei tinn kal khawh si ]
Na ka bawm kho ma?
[ Na ka bawm kho ma ]
[ Ka ngai thiam ]
Kaa kawm tuk
[ Ka lawm tuk ]
[ Mang hta ]
အိုင်ဒီးယက်ကန်းအိမ်သည် ဟားခါးမြို့ရှိ ဂျတ်ခုတ်သည့် အမျိုးသမီးများအား ပထမဦးဆုံး ကူညီထောက်ပံ့ပေးသော စွန့်ဦးတီထွင်သည့် လူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေး လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ အိုင်ဒီး ယက်ကန်းအိမ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ချင်းရိုးရာ ဂျတ်ခုတ်လုပ်ငန်းအား ဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ချင်းအမျိုးသမီးတို့အား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း နှင့် သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချ၍ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချနိုင်ရေးတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အိုင်ဒီးယက်ကန်းအိမ်အား မအန်နာဗျက်ထားမွေးမှ ဂျတ်ခုတ်အမျိုးသမီး (၁၃)ဦးဖြင့် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အိုင်ဒီးယက်ကန်းအိမ်မှ ခေတ်သစ် ချင်းရိုးရာ အထည်များနှင့် ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သည့် ချင်းရိုးရာအဆင်များအား ထိန်းသိမ်းသည့် အထည်များအား ရက်လုပ်ဖြန့်ဖြူး လျက်ရှိပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်၏ ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်သည် မြို့တော် ဟားခါးရှိ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ချင်းလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊ သမိုင်းအစဉ်အလာများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ယခင် ဘုရင်မင်းမြတ်များထံမှ ရရှိခဲ့သည့် လက်ဆောင်မွန်များ၊ စာပေနှင့် ကျောက်စာများအား လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဝင်ကြေးအနေဖြင့် နိုင်ငံသား(၁)ဦးလျှင် ၂၀၀ကျပ်၊ နိုင်ငံခြားသား(၁)ဦးလျှင် ၅၀၀၀ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ပြကွင်း၊ ပြကွက်၊ ပြခန်းများဖြင့် ဗဟုသုတသမိုင်းကြောင်း စုံလင်စွာ လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဇိန်မှုတောင် (Mt. Zing Hmuh)သည် ဖလမ်းမြို့၊ ဟားခါးမြို့နှင့် ထန်တလန်မြို့ကြားတွင် တည်ရှိပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၈၁၄ ပေတွင် ရှိပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သဘာဝ သစ်ပင်ပန်းပင်များ၊သစ်ခွပန်းများ၊ ကျေးငှက်များ၊ တိရစ္ဆာန်များ ပေါကြွယ်ဝသော တောင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သီးမြစ် ၊တီအိုင်ချောင်းမှတဆင့် မဏိပူရမြစ်နှင့် နောက်ဆုံးကုလားတန်မြစ်အဖြစ် ပေါထွန်းစေဖို့အတွက် မြစ်ဖျားခံသည့် ဒေသခံတို့၏ အမြတ်တနိုးတန်ဖို့ထားရာလိုင်သီးလီ( Lai Ti Li )သဘာဝရေကန်တည်ရှိသော တောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဇိန်မှုတောင်သည် တောင်တက်ခြင်း၊ တောကြမ်း လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ သဘာဝအလှနှင့်အတူ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်းများအား စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အသွားသင့်ဆုံး နေရာဖြစ်ပါသည်။ ဇိန်မှုတောင်သို့ ဖလမ်းမြို့၊ ဟားခါးမြို့နှင့် ထန်တလန်မြို့ကနေ မော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။
ဗန်ဟရဲရိုးရာအိမ်သည် ချင်းပြည်နယ်ရှိ လိုင်လူမျိုးစုတို့၏ ရိုးရာနေအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း ရိုးရာအိမ်သည် ဟားခါးမြို့ရှိ ကိုက်စိရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ယင်းရိုးရာအိမ်၏ ထူးခြားချက်မှာ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ရာတွင် သံချောင်း တစ်ချောင်းမျှပင် အသုံးမပြုဘဲ တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ နေအိမ်တွင် ချင်းလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာဓလေ့များ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် သမိုင်းကြောင်းများကိုလည်း လေ့လာ နိုင်ပါသည်။ စော်ဘွားတစ်ဦး၏ အိမ်အခင်းအကျင်းများလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။
ချင်းရိုးရာအိမ်တွင် ချင်းလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာဓလေ့များ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ရိုးရာနတ်တိုင်များ၊ ကျောက်ဖျာများ၊ သမိုင်းကြောင်းများနှင့် ရိုးရာတေးဂီတများကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ အိမ်ဗရန်တာမှ ဟားခါးမြို့၏ အလှကိုလည်း လေ့လာခံစားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းရိုးရာအိမ်သည် ဟားခါးမြို့၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက် တောင်ဇလပ်လမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ချင်းရိုးရာဝတ်စုံများ ဆင်မြန်းကာ ချင်းတူရိယာများ တီးခတ်နိုင်ပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် တောင်တန်းများ များစွာရှိသည့်အနက် ရှားပါးစွာဖြင့် အလွန်လှပသော တောင်ချိုင့်ဝှမ်းကို သီးမြစ်လွင်ပြင်ဟုခေါ်ပါသည်။ သီးမြစ်ချောင်းသည် ဟားခါးမြို့နယ်နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်တို့ကို ဖြတ်သန်း စီဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ သီးမြစ် လွင်ပြင်သည် ဒေသခံများ၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် သာမက အပန်းဖြေ လှုပ်ရှားမှုများအတွက် နေရာကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဟားခါးမြို့မှ ၁၂ မိနစ်ခန့် မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ပြီး ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျော်ကြားလှသော ကုလားတန်မြစ်၏ မြစ်ဖျားခံရာမြစ် ဖြစ်ပါသည်။ သီးမြစ်လွင်ပြင်နှင့် သီးမြစ်ချောင်းတို့သည် အလွန်လှပသော နေရာနှင့် မေ့မရနိုင်သော အတွေ့အကြုံများကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
ဇေတဝန်တောရ စာသင်တိုက်နှင့် တရားဓမ္မရိပ်သာသည် ချင်းပြည်နယ်၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်တွင် ချင်းပြည်နယ် တောင်တန်းသာသနာပြု (ရေဆူ) ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဦးဥတ္တမသာရ၏ စီလီကွန် ရုပ်ပွားတော်အားလည်းကောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့ အိပ်မက်တော်ရ သစ္စာအောင်မြေ ဆုတောင်းပြည့် ကုန်းတော်နှင့် သံသရာအေးစေတီအားလည်းကောင်း၊ ချင်းတောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရအားလည်းကောင်း ကြည်ညိုဖူးမျှော်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၄/ဟခန (သ) ၀၀၀၀၀၁ ဖြင့် သာသနာဝင်အမှတ် ဖြစ်ခဲ့သော တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ဘုရားကြီး အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တသီရိန္ဒ ဆရာတော် ရုပ်ကလာဒ်တော်၊ ကကုဿန်စေတီတော် နှင့်ဇေယျသိဒ္ဓိရုပ်ပွားတော်သည် ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့ သာသနာ့ပါလကုန်းတော် (ရုန်းတောင်)တွင် တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ရုပ်ကလာပ်တော် နှင့် စေတီတော် တည်ရှိရာ သာသနာ့ပါလ ကုန်းတော်သို့ သွားရောက်မည်ဆိုပါက စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့အခြေချ(ဟားခါးမြို့) ဝင်ပေါက်မှ တဆင့် ဝင်ရောက်ဖူးမြှော်နိုင်ပြီး၊ ဘုရားဖူးလာ ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် မနက်(၆)နာရီမှ ညနေ (၆) နာရီအတွင်း ကြည်ညိုချမ်းမြေ့စွာ ဖူးမြှော်နိုင်ရန်ကိုလည်း စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့အခြေချ(ဟားခါးမြို့) မှလည်း ဖိတ်မန္တက ပြုပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။ တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီး အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တသီရိန္ဒ ဆရာတော်ကြီး အနေဖြင့် မန္တလေးတိုင်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ခရမ်းကိုင်းကျေးရွာတွင် ၁၂၉၃ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၈ ရက်နေ့ တွင် ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး ၁၃၁၀ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆုတ် ၉ရက်နေ့တွင် မြင့်မြတ်သော ရဟန်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဟားခါးမြို့ ခွါရုံတောင်တန်းသာသနာပြုကျောင်းတွင် သီတင်းသီလဆောက်တည်ကာ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရိဟိတ ကျောင်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်၍ ကလေး သူငယ်များ စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သာသနာပြန့်ပွားရေး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်၊ ချင်းပြည်နယ် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌတာဝန်တို့ကို (၂)ကြိမ်တိုင်တိုင် ထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘွဲ့ တံဆိပ်တော်ကို ရရှိတော်မူခဲ့ပြီးနောက် သက်တော် (၇၅)နှစ်၊ သိက္ခာတော် (၅၅) ဝါ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၀) ရက်နေ့တွေင် ခန္ဓာဝန်ချတော်မူသည်။ ယခုအခါ ဆရာတော်ကြီး ခန္ဓာဝန်ချပြီးနောက် ကြွင်းကျန်ရစ်ခဲ့သော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ပွါးတော် ၊ ကကုဿန်စေတီတော် နှင့် ဇေယျသိဒ္ဓိရုပ်ပွားတော် တို့အား တည်ထား စံပါယ်လျှက်ရှိသော၊ အေးမြသော ရုန်းတောင်လေတိုက်ခိုက်ရာ ၊ လှပသော ချယ်ရီပန်းများ ဖူးပွင့်ရာ ချင်းပြည်နယ် သာသနာ့ပါလကုန်းတော် (ရုန်းတောင်) ပေါ်သို့ လာရောက်ဖူးမြှော်နိုင်ဖို့ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။